Koronaavaayirasii: Ministirri Muummee UK Booriis Joonsan koronaavaayirasiin qabaman - BBC Afaan Oromoo
26 Bitooteessa 202026 Bitooteessa 2020
Ministirri Muummee UK Booriis Joonsan kronaavaayirasiin qabamuu isaanii waajjirri isaanii mirkaneesse. Mallattoon dhukkubichaa irratti mul'ate salphaa akka ta'eefi adda of baasanii yaalamaa mootummaa biyyattii hogganuu akka itti fufan dubbi himaan isaanii beeksiseera.
Itoophiyaan qoricha koronaavaayirasii qopheessaan jira jette
Moosaa Faakii shakkii koronaavaayirasiin 'adda of baasan'
MM 'lola biyyaalessaa koronaavaayirasii' manaa hogganuufi
Ummanni miiliyoona walakkaa caalu Covid-19'n qabame
Pirezidant Tiraamp Ameerikaan baay'ee qorachuu himan
Lakkoofsi Covid-19 dabaluun paakistaan yaaddesse
Barattoota sodaa Covid-19'f maatiitti galaa turan 2 du'an
Ruwaandaati lakkoofsi Covid-19 qaban 50 gahe
Donaald Tiraampiifi Shi Jinpiing Covid-19 irratti mari'atan
Lakkoofsi namoota Itoophiyaatti Covid-19'n qabaman 16 gahe
Mikeel Arteetaa: ‘Nama hammachuun yaadee ture’
...tti maxxanfame 17:36 27 Bitooteessa 202017:36 27 Bitooteessa 2020
Amma nu gaheItaliin lakkoofsa namoota du'anii olaanaa galmeessifte
Italiin sa'aatii 24 darban qofa keessatti namoonni 969 koronaavaayirasiin du'uu isaanii beeksifte.
Lakkoofsi namoota du'anii amma 9,134 gahee jira.
Guyyaa har'aa qofa namoonni haaraa 4,401 vaayirasichaan qabamaniiru. Walumaagalatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 66,414 gaheera.
...tti maxxanfame 15:51 27 Bitooteessa 202015:51 27 Bitooteessa 2020
"Ummata keenya balaa hamaa dhufuu malurraa baraaruuf tattaafachaa jirra" - Abiy Ahimad
Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii 16 gahuu hordofuun, weerara vaayirasichaa ittisuuf MM Abiy Ahimad tarkaanfiiwwan haaraa fudhatamuu qaban labsanii jiru.
Hanga ammaattii Itoophiyaa keessatti duuti mudate jiraachuu baatus namootni 16 qabamuu isaanii qorannoon mirkanaa'eera kan jedhan MM Abiy, "lakkoofsi kun haalaan dabalee gara du'aatti akka hin ceene of eeggannoo guddaan ni barbaachisa" jedhan.
Daandii Qilleensaa Itoophiyaa kana dura imala gara buufataalee 30 taasisu dhaabe dabalatee gara buufataalee 72'tti imala taasisu adda kuteera jedhan.
Quote Message: Torbee dhufu haala isaa ilaallee buufataalee biroottis imala godhamu ni dhaabna.
Torbee dhufu haala isaa ilaallee buufataalee biroottis imala godhamu ni dhaabna.
Quote Message: Uummata keenya balaa hamaa dhufuu malurraa baraaruufi du'a hir'isuu karaa dandeessisuun mootummaan tattaafachaa jira.
Uummata keenya balaa hamaa dhufuu malurraa baraaruufi du'a hir'isuu karaa dandeessisuun mootummaan tattaafachaa jira.
Dabalataan torbee lamaan dhufaniif manneen barnootaa cufaa ta'anii akka turan murta'uus himaniiru.
Dabalata asii dubbisaa: Weerara COVID19 ittisuuf tarkaanfiiwwan dabalataa labsaman
...tti maxxanfame 14:55 27 Bitooteessa 202014:55 27 Bitooteessa 2020
Beektonni qorichaa aadaa fi kan ammayyaa waliin ta'uun Itoophiyaa keessatti koronaavaayirasiif qoricha qopheessaa akka jiran Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Itoophiyaa beeksisee jira.
Qorichi qophaa'aa jira jedhame adeemsa qorannoo bu'uuraafi yaalii laaboraatoorii irra deddeebiin taasifame darbuun gara oomishaafi sakkatta'insa kilinikaaliitti akka ce'u taasifameera jedha gabaasni FBC.
Qorannoon qoricha kanaa lammilee Itoophiyaa beekumsa qoricha aadaa qabanii fi ogeeyyii fayyaa biyya keessaafi ala akka hirmaachise hime Ministeerichi.
...tti maxxanfame 13:43 27 Bitooteessa 202013:43 27 Bitooteessa 2020
Finfinnee kan jiran barreessaa olaanaan Gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii shakkii koronaavaayirasiin adda of baasuu isaanii beeksisan.
Anga'aan kun adda kan of baasan waahilli isaanii tokko koronaavaayirasiin qabamuun isaa waan mirkanaa'eef of-eeggannoof akka ta'e fuula 'twitter' isaanii irratti barreessanii jiru.
Isaan qofa osoo hin taane namoonni biroo nama koronaavaayirasiin qabamuun isaa mirkanaa'e waliin qunnamtii qaban adda of baasanii akka jiranis himaniiru.
Namni waahila hojii aanga'aa kanaa ta'eefi koronaavaayirasiin qabamuun isaa mirkanaa'ee nama lammii Moorishiyas ganna 72 Jimaata Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa vaayirasichaan qabamuu isaa beeksise akka ta'e AFP gabaasee jira.
Namni kun Bitootessa 14 Koongoo irraa gara Finfinneetti kan imale ta'uun isaa himamee jira.
Dabalata asii dubbisaa: Hogganaan Gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii shakkii koronaavaayirasiin 'adda of baasan'
...tti maxxanfame 12:40 27 Bitooteessa 202012:40 27 Bitooteessa 2020
MM UK Booriis Joonsan erga koronaavaayirsiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee booda mana taa'anii biyyattii hoganuu akka itti fufan himan.
"Mallattoo dhukkubichaa xixiqqaa, ho'a qaamaafi qufaa ofirratti arguun eegale" jedhan ergaa viidiyoon 'twitter' isaanii irratti dabarsaniin.
Sana booda gorsa ogeessa fayyaatiin qoratamuufi poozatiivii ta'anii argamuu Booriis Joonsan himaniiru.
"Adda of baasee manaa hojjechaan jira. Kuni wanta sirrii ani gochuu qabudha."
"Galatni teeknooloojiif haa ta'u, garee koo waliin wal qunnamuu fi lola biyyaalessaa koronaavaayirasii irratti eegalle hogganuu ittan fufa," jedhan.
...tti maxxanfame 11:28 27 Bitooteessa 202011:28 27 Bitooteessa 2020
Amma nu gaheMinistirri Muummee Biriteen koronaavaayirasiin qabaman
Ministirri Muummee Biriteen koronaavaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa'e.
Ministirri Muummee Joonsan mallattoo kan agarsiisan yoo ta’u adda of qoodanii ni jiraatu jedhameera.
Haa ta’u malee, biyyattii hoogganuu ittuma fufu jedheera ibsi waajjirir isaanii baase.
...tti maxxanfame 11:03 27 Bitooteessa 202011:03 27 Bitooteessa 2020
Mikeel Arteetaa: ‘Namoota jaaladhu hammachuun yaade’
Leenjisaan Arsenaal koronaavaayirasiin qabamee ture yeroo ammaa bayyanachuu dubbate.
Barri ammaa bara wanti hundi miidiyaa hawaasummaa irratti miira walii ibsan ta’eera.
Ani garuu namootan jaaladhu hammachuun yaade jechuun yeroo torban lamaaf of qoodee jiraate wanta dhabe dubbateera.
Arteetaan gaafa Kamisaa akka dubbatetti amma akka fayyeefi namoonni gorsa mootummaa akka dhagahan dhaameera.
Akka inni jedhutti waa’ee ijoollee isaa sadiitu isa yaaddessee ture.
Sababni isaas haati warraafi kan isaan gargaartu dhukkuba kanaan waan qabamanii turaniifi.
...tti maxxanfame 10:04 27 Bitooteessa 202010:04 27 Bitooteessa 2020
Jiraataan Magaalaa Adaamaa tokko koronaavaayirasiin qabame
Ministirri Fayyaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen namoonni afur koronaavaayirasiin qabaman keessaa tokko jiraataa Magaalaa Adaamaa ta’u beeksiise.
Jiraataan Magaalaa Adaamaafi gaheessa umuriinsaa waggaa 61 ta’unsaa himamee kunis, haalli hojiisaa lammiilee biyya alaa waliin kan walitti fidu ta’u mirkanaa’eera.
Dhukkubsataan kunis erga Bitooteessa 18, 2020 mallattoo dhukkubbi ofirratti arganii kaasee adda bahuun kan turan yoo ta’u, guyyaa lamaan dura ammoo gara mana yaalaa deemuun qoratamanii vaayirasichaan qabamuun mirkanaa’eera.
Wayita ammaa kanattis dhukkubsataan kuni wal'aansa argataa kan jiran yoo ta’u, namoonni isaan waliin tuttuqaa ni qabaatu jedhaman 24 adda baafamusaanii Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beekiseera.
Adama TownCopyright: Adama Town
...tti maxxanfame 9:15 27 Bitooteessa 20209:15 27 Bitooteessa 2020
Amma nu gaheItoophiyaan namoota dabalataa afur COVID-19 qabaman mirkaneessite
Itoophiyaatti namoonni koronaa vaayirasiidhaan qabamun isaanii mirkanaa’e afur dabalataa adda baafamu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise.
Kan harraa kana waliinis biyyattii keessati lakkoofsi namoota COVID-19n qabamuun mirkanaa’ee 16 gaheera.
Namoota afur dabalataan qabaman keessaa sadii lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an isaan keessaa lama immoo kan dhiheenya imala biyya alaa hin taasisnedha.
Nami biraa qabame lammii Moorishiyees yoo ta'an dhihoo Kongoo Biraazaaviliiti deebi'ani.
Itoophiyaan namoota 16 irratti koronaavaayirasii argatte
...tti maxxanfame 8:25 27 Bitooteessa 20208:25 27 Bitooteessa 2020
Pirezidantiin Laayibeeriyaa Covid-19 irratti sirba baasan
Taphataan beekamaa kubbaa miilaa duraaniifi pirezidantiin ammaa Laayibeeriyaa hubannoo ummataa cimsuuf koronaavaayirasii irratti sirba baasan.
Haa ta'u malee, sirba osoo hin taane haasaa fakkaata kan jedhan jiru.
Sirba isaanii kunoo isiniif qoodne.
...tti maxxanfame 7:52 27 Bitooteessa 20207:52 27 Bitooteessa 2020
‘Kabaja guddaa’ jedhan Tiraamp erga pirezidantii Chaayinaa dubbisan booda
Pirezidantiin Chaayinaa Donaald Tiraamp dhukkuba koronaavaayirasii irratti pirezidantii Chaayinaa waliin bilbilaan haasa’ani.
Pirezidant Tiraamp dhukkuba ji’a muraasa dura Chaayinaatti eegale ‘‘vaayirasii Chaayinaa’’ jechuun waamaa turani.
Amma waan akkanaa barreeffama tiwiitara isaanii irratti hin barreessine.
‘’Chaayinaan vaayirasii kana ciminaan hubatteetti. Walitti siqnee hojjetaa jirra. Kabaja guddaa!’’ jechuun barreessan.
...tti maxxanfame 7:43 27 Bitooteessa 20207:43 27 Bitooteessa 2020
'Chaayinaan lakkoofsa namoota koronaan qabamanii homaa hin dhoksine' jette
Chaayinaan lakkoofsa namoota koronaan qabamanii homaa hin dhoksine jedhani pirezidaantiin biyyatti deebii Ameerikaaf kennaniin.
Akka miidiyaan mootummaa Chaayinaa gabaasetti Chaayinaafi Ameerikaan waliin ta’un koronaavaayirasii ittisuurrati akka hojjetan Pirezidantiin Chaayinaa Shi Jinpiing gaafataniiru.
Bulchitoonni lamaan bilbilaan haasa’aniiru.
Isa Donaald Tiraamp Chaayinaan dhukkuba addunyaa waliin gahe daftee nutti hin himne jedhan deebii kennaniinis Chaayinaan yeroo hunda iftoomina qabdi jechuun himan.
Lammiilee Chaayinaa Ameerikaa jiraatanif Ameerikaan akka eegdu abdii akka qabanillee Shii Jinpiing ibsaniiru.
Chaayinaan biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaafi Afrikaa dhukkuba koronaavaayirasiin rakkachaa jiranif deeggarsa ergaa jirti.
...tti maxxanfame 7:35 27 Bitooteessa 20207:35 27 Bitooteessa 2020
Amma nu gaheAfriikaan Kibbaa yeroo jalqabaaf namoonni Covid-19'n du'uu beeksiifte
Afriikaa Kibbaatti namoonni lama sababii koronaavaayirasitiin du’usaanii ibsa gamana kana baheen beeksifte.
Ministeeri Fayyaa biyyattii Ziweelinii Mikihizee akka ibsaniitti namoonni lama ganda Lixa magaalaa Keeppiitti hospitaala dhuunfaa fi kan motummaa keessatti du'ani jedhan.
Kana malees lakkoofsi namoota vaayirasichaa qabamaniif 1,000 ol darbuusaa himaniiru.
Guyyaa kaleessaa namni jalqabaa dhukkuba kanaan lubbuu dhabuu isaanii beeksisuun ishee ni yaadatama.
...tti maxxanfame 7:29 27 Bitooteessa 20207:29 27 Bitooteessa 2020
Barattoonni sodaa Covid-19'f gara maatii galaa turan 'lama du'an'
Barattoonni yunivarsiitii Waachaamoo sababa sodaa koronaavaayirasiin maatiitti galaa turan lama balaa tiraafikaan lubbuun isaanii darbe.
Balaan kuni Naannoo Amaaraa Godina Goojjam Bahaatti mudate akka ta'e miidiyaan naannichaa gabaaseera.
Balaa kanaan barattooni 22 biroo miidhamaniiru jedhameera.
Dabalata: Barattootni Yunivarsiitii Waachaamoo 'lama du'an'
Mootummaan maaliif murtii jijjiire?
...tti maxxanfame 7:17 27 Bitooteessa 20207:17 27 Bitooteessa 2020
Ruwaandaatti lakkoofsi namoota Covid-19 qaban 50 gahe
Ruwaandaan namoonni dabalataa sagal dhukkuba addunyaa muddama keessa galcheen qabamuu mirkaneessite.
Kunis dhukkubichi biyyattii keessa argame eegale torban lama gidduutti 50 gahe jechuudha.
Namoota 9 tibbana balaan kuni irratti argame keessaa shan Dubaayii kan dhufan yoo ta’u tokko Nezerlaand tokko immoo Ameerikaatii dhufan.
Lama immoo biyyuma keessa qabamuu Ministeerri Fayyaa biyyattii ibsa baasaniin ibsaniiru.
...tti maxxanfame 6:22 27 Bitooteessa 20206:22 27 Bitooteessa 2020
Koronaavaayirasiif qorichi yeroo dhihootti ni argamaa?
Dhukkubni addunyaa yaaddesse koronaavaayirasiin hanga ammaa guutuu addunyaatti namoota 24,000 caalu galaafateera.
Maddi isaa Chaayinaa kan ta'e dhukkubni kuni hanga ammaa qorichi hin argamneef.
Ta'us, addunyaa waliin gahaa dargaggoofi maanguddoo osoo hin jedhin galaafataa jira.
Qorichi yeroo gabaabaatti ni argamaa?
Dabalata: Qorannoon saayintistoonni taasisan maalirra gahe?
...tti maxxanfame 6:17 27 Bitooteessa 20206:17 27 Bitooteessa 2020
Afrikaan Kibbaa labsii torbee sadii mana turuu hojiirra olchuu eegalte
Afrikaan Kibbaa labsii koronaavaayirasii ittisuuf jecha lammiileen torbee sadii mana haa turan jedhu hojiirra olchuu eegalte.
Humnoonni nageenyaa Afrikaa Kibbaa tatamsa’ina koronaavaayirasii hir'isuuf jecha torbaan sadiif biyyattii guutuutti namu akka hinsochooneef hojiirra olchaa jirti.
Afrikaa Kibbaatti dhimma barbaachiisaaf yoo ta’e malee socho’uun kan dhorkame yoo ta’u, dhorkaa kanas raayyaa ittisa biyyaafi poolisiitu hojiirra olmaasaa hordofa.
Kaleessa waaree duras osoo labsichi hojiirra ooluu hin eegaliin dura jiraattoonni waan barbaachisu bitachuuf suuqiiwwan fuldura hiriiranii turan.
Biyyattii keessati hanga ammaatti namoonni 927 koronaavaayirasiin qabamunsaanii kan mirkanaa’e yoo ta’u, kunis Ardii Afriikaa keessatti lakkoofsa isa olaanaadha jedhameera.
...tti maxxanfame 5:33 27 Bitooteessa 20205:33 27 Bitooteessa 2020
Pirezidaant Tiraamp maal jedhan?
Yeroo ammaa Ameerikaan biyya addunyaa kamuu caalaa bakka dhukkubsattoonni koronaavaayirasii baay’inaan keessatti argamanidha.
Dhimma kana kan gaafataman pirezidant Tiraamp nuti namoota hedduu wanta qoranneefi jedhaniiru.
Gabaasa Chaayinaa irraa dhufu akka shakkanis himan.
Dabalataaf: Tiraamp maal dubbatan?
...tti maxxanfame 5:21 27 Bitooteessa 20205:21 27 Bitooteessa 2020
Koronaavaayirasiin akka nu hinqabneef wantoota gochuu qabnu keessaa:
Erga tatamsa'iinni koronaavaayirasii dhagahamuun addunyaa raasuu eegalee kaasee, oggeessonni fayyaa gorsa adda addaa kennaa jiru.
Isaan keessaa muraasni kan asiin gadii kana mee hubadhaa.
...tti maxxanfame 5:13 27 Bitooteessa 20205:13 27 Bitooteessa 2020
Lakkoofsi namoota Covid-19'n Paakistaanitti qabamanii guddachuun sodaa uumaa jira
Paakistaan keessatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii dabalaa dhufuun sodaa biyyattiitti uumaa jiraaachu himame.
Guyyaa Kamisaa kaleessa qofaatti namootni 66 vaayirasichaan qabamunsaanii mirkanaa’eera.
Kunis lakkoofsa namoota vaayirasiin qabamanii 1,057 yoo gahu, taatee haaraan torban kana keessa galmaa’e kan torbanoota darbanii dachaa lamaan kan caaluudha jedhameera.
Taateewwan koronaavaayirasii hedduunis kan biiyyoota akka Iraan, bakka vaayirasichi akka qaanqee abiddaa keessa socho’ee irraa dhufan ta’u mootummaan biyyattii ni ibsa.
Biyyoota akka Paakistaan bakka miseensonni maatii hedduun bakka tokko jiraataniifi tajaajilli fayyaa dadhabaa ta’eetti, tatamsa’ina vaayirasi kanaa to’achuun baay'ee rakkisaa akka ta’e yaadama.
Oggeessi fayyaa tokkoos haalli ittisaa gahaan hojiirra kan hin oolfamne yoo ta’e, biyyattiin gara ‘’badiinsaatti’ adeemaa jirti jechuun BBC’tti himeera.